Andron’ny Zon’Olombelona Ao Emirà Arabo Mitambatra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Desambra 2012 14:14 GMT
Olona an-tapitrisany no mankalaza ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Zon'olombelona ka mitaky ny fanafoanana ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona misy ankehitriny manerana ny toerana marobe, tsy mba afaka mizaka ny zony momba ny fahalalaham-pitenenana sy ny famoriam-bahoaka ireo mpikatroka ao Emirà Arabo Mitambatra (eny fa na dia mikarakara fihetsiketsehana aza na manoratra momba ny fanitsakitsahana ny zo ataon'ireo manampahefana). Rahonana izy ireo amin'ny fampiasana ny sehatry ny fampahalalam-baovao sosialy tahaka ny Twitter na ny Facebook izay hizarany vaovao momba ireo gadra politika sy gadra noho ny fanehoan-kevitra na fanitsakitsahana zo hafa izay hampiharin'ny governemanta amin'ny anaran'ny “fiarovam-pirenena”. Tsy mba afaka namonjy ny fanentanana tao amin'ny Twitter momba ny “Andron'ny zon'olombelona” akory ny maro tamin'izy ireo.
Vao haingana, mpikatroka tanora indrindra, Mohamed El-Zumer (18 taona) no voasambotra noho ny sioka nalefany tao amin'ny Twitter izay manohana gadra politika ao Emirà Arabo Mitambatra ary nitaky ny famoahana azy ireo. Izy no gadra politika tanora indrindra, nosamborina noho ny fanehoany ny heviny tamin'ny alalan'ny fampiasana Twitter. Nosamborina izy taorian'ny didim-panjakana momba ny “heloka bevava an-tserasera na cybercrimes” izay manenjika ny fahalalaham-pitenenana. Nilaza ny Mpanara-maso ny Zon'olombelona fa ny didim-panjakana federaly ara-dalàna laharana 5/2012 dia ahafahana manenjika sy mampiditra am-ponja ireo olona izay mampiasa ny teknolojiam-baovao ka, anisan'izany, ny mitsikera ny manampahefana ambony, ny mitaky ny fanovana ara-politika, na mikarakara fihetsiketsehana tsy nahazoan-dalana. Mandrahona ireo mpikatroka, bilaogera sy olo-tsotra mampiasa ny zony haneho hevitra an-kalalahana ny didim-panjakana.
Nilaza tamin'ny Foibe Emirà momba ny Zon'Olombelona (ECHR) ny fianakavian'i El-Zumer fa taorian'ny fisamborana azy, sy ny fikarohana azy tany an-tranony, nentina tany amin'ny toerana tsy fantatra izy. Tamin'ny fisamborana an'i El-Zumer, araka ny fantatro, niakatra 64 ny isan'ireo gadra politika. Maro amin'ireo gadra no tsy fantatra ny toerana misy azy, ary tsy mahazo mitsidika azy ireo ny fianakaviany. Tsy misy ihany koa ny fitsarana marina, ary nanambara ny ankamaroan'ny governemanta fa manohintohina ny filaminana nasionaly ireo mpikatroka milamina.
Nandritra ny Andro Iraisam-pirenena ho an’ ny Zon'Olombelona, tokony tsy ho adinoina ireo gadra ireo. Misioka amin'ny anaran'izy ireo no ataoko sy ataon'ireo mpikatroka ny zon'olombelona maro hafa androany (tamin'ny andro iraisam-pirenena ho an'ny Zon'olombelona). Laharam-pahamehana ho an'ny mpikatroka ny zon'olombelona ny fahalalaham-pitenenana, na inona na inona hevitra sy tontolo politika misy ireo gadra.